LIverpool Oo Bedelka Wijnaldum Ka Raadsatay Kooxda Roma, Belerin Oo Kusii Jeeda Atletico Madrid iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Maanta Oo Arbaco Ah… - Goolhaye
Jun 9, 2021 Jun 13, 2021 SiganeComment(0)
Waxaa saacad kasta iska soo daba dhacaya warbixinada wargeysyada caalamku ka qorayaan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda hadaba waxaan soo gudbineynaa wararka ugu waaweyn suuqa kala iibsiga ciyaartoyda maanta oo Arbaco ah.
– Liverpool ayaa dalab rasmi ah ka gudbisay xidiga qadka dhexe uga ciyaara kooxda Roma ee Lorenzo Pellegrini iyadoo u aragta badalka saxda ah ee Georginio Wijnaldum oo ku biiray kooxda PSG.
Pellegrini oo 24 jir ah ayaa kooxdiisa Roma udhaliyey 11 gool isagoo caawiyey 9 kale horyaalka talyaaniga xili ciyaareedkii dhamaaday.
– Westham United ayaa dooneysa iney toos ula wareegto Jese Lingard oo qeybtii labaad ee xili ciyaareedkii hore amaah kula joogay isagoo soo bandhigay hibadiisa ciyaareed.
David Moyes ayaa doonaya in heshiiska joogtada ah ee Jede Lingard lasoo gabagabeeyo kahir inta uusan suuqa kala iibsiga xirmin.
Lingard oo 28 jir ah ayaan wax kulan ah usafan kooxdiisa Manchester United qeytii hore ee xili ciyaareedka balse tababaraha United Solskajaer ayaa rajeynaya in Lingard uu kusoo laabto garoonka Old Trafford.
–Atletico Madrid ayaa xiiseyneysa difaaca kooxda Arsenal iyo xulka Spain Hector Bellerin iyadoo u aragta badalka Kieran Trippier oo laga yaabo inuu kooxdiisa ka tago xagaagan.
Daafacii hore ee Totenham Kieran Trippier ayaa lala xiriirinayaa inuu usoo dhaqaaqo kooxda Manchester United suuqa xagaagan kadib markii uu kooxdiisa Atletico Madrid kula guuleystay horyaalka Spain xili ciyaareedkii dhamaaday.
Bellerin oo lagu qiimo aduun lacageed oo dhan £20m ayaa doonaya dhankiisa inuu ku laabto dalkiisa hooyo iyo kooxda Atletico Madrid xagaagan.
–Chelsea ayaa albaabada u furtay Hudson-Odoi si uu uga tago kooxda xagaan waxaana lala xiriirinayaa kooxda Bayern Munich oo dhowrjeer dalab kasoo gudbisay 20 jirka reer England.
Hudson-Odoi oo 2sano ka hor ka qalin jabiyey akademiyada Chelsea ee Cobhan ayaa 4 jeer oo kala duwan dalab ka helay kooxda Bayern Munich balse waxaa dalabyadaasi diiday kooxda Chelsea oo usheegtay in uusan iib aheyn xidigeeda balse hada waxey uu muuqataa inuu fursad fiican uheysto ku biiritaanka kooxda reer Germany ee Bayern Munich.
Manchester United Oo Ka Cabsi Qabta In Paul Pogba Uu Si Xor Ah Kaga Tago Kooxda Sanadka Dambe!!